Koox kubadeed oo garoonkeeda hor dhigtay taangi dagaal - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka RED STAR BELGRADE
Kooxda kubadda cagta ee Red Star oo ka dhisan magaalada Belgrade ee caasimadda dalka Serbia ayaa garoonkeeda hor dhigay taangi iyada oo "soo jiidasho" ooga gol leh; arrintaas ayaana dood kulul ka dhalisay dadka isticmala baraha bulshada ee ku nool gobolkaas oo dhan.
"Halhayska caanka ah ee kooxdu wuxuu ahaa mashiinkii Star wuu shaqeeyay, taantiga horyaalla qaybta waqooyigana arrintaas ayuu matalayaa. The Northern Army wuu ka adag yahay gaari dagaal."
Inkastoo kooxdu u aragto arrin faa'iido leh oo raynrayn abuuri karta ka hor kulanka adag ee ay leeyihiin, balse dad kale ayay soo xasuusisay arrin hore oo xanuun leh oo ka dhacday gobolka Balkans.
Wargeyska maalin laha ah ee Jutarnji List ee ka soo baxa Croatia ayaa tallaabadas ku tilmaamay "daandaansi aan caadi ahayn", wuxuuna dadka soo xasuusiyay in taageerayaasha kooxda kubbadda kolayga ee Red Star ay taangi ku soo sawireen boor ay ku qoran tahay "Vukovar", arrintaas ayaa dhacday labo sano ka hor.
"Wakhtigaas kooxda Zvezda [Red Star Belgrade] waxay soo saartay war qoraal ah oo ay ku sheegayso in taangigu uu yahay qayb ka mid ah dhaqan dhaxal ah isla markaasna aan loola gol lahayn Vukovar," ayuu yiri wargeyskaasi.